Micheal Keating oo ka hadlay go’aanka uu Madaxweyne Farmaajo cafiska ugu fidiyay Al-shabaab | TOP NEWS
Micheal Keating oo ka hadlay go’aanka uu Madaxweyne Farmaajo cafiska ugu fidiyay Al-shabaab
Wakiilka gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Arimaha Somaliya Micheal Keating ayaa sheegay inay muhim tahay wada hadal lala furo Al-shabaab si meesha looga saaro dagaalka ka socda dalka Somaliya.
Danjire Micheal Keating oo Waraysi gaara Siiyey Wargeyska kasoo baxa dalka Maraykanka ee NEWSWEEK ayaa shaaca ka qaaday iney haboontahay in Al-shabaab lala bilaabo waan waan,wuxuuna tilmaamay in taasi ay soo dadajin karto in lasoo afmeero dagaalka lagula jiro Al-shabaab.
Micheal Keating ayaa sidoo kale bogaadiyey cafiskii uu dhawaan Al-shabaab u fidiyay Madaxweynaha Dowladda Federaalka Somaliya Maxamed C/llaahi Maxamed (Farmaajo) Keating ayaa tilmaamay in Somaliya ay marayso xaalad adag marka loo eego sanadkii hore.
“Cafiska loo fidiyey Al-shabaab waa bilow fiican balse kuma filna laakiin waxaad u baahan tahay inaad la timaado qorshe kale oo garaacis ah,sida kaliya ee Al-shabaab lagaga guuleysan karo waa in afka wax Macmacaan loo galiyo lana garaaco,taasoo ah in lala furo wadahadal Siyaasadeed.”ayuu yiri Wakiilka gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arimaha Somaliya Micheal Keating.
Keating ayaa dhanka kale rajo xumo ka muujiyay in si fudud looga adkaado Al-shabaab oo sii kordhiyey weerarada ay ka geysanayaan Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya.
Micheal Keating oo ka hadlay go’aanka uu Madaxweyne Farmaajo cafiska ugu fidiyay Al-shabaab added by Tifaftiraha Somalida Maanta on May 18, 2017